Shina nanamafy ny polyvinyl chloride (MPVC-SR) fanodinana paompy fifandraisana sy mpanamboatra | Shengyang
Fantsom-pifandraisana Polyvinyl Chloride (MPVC-SR) nohavaozina nohamafisina
◎ Ny fantsom-pifandraisana tsy miova fanamafisana natokana ho an'ny PVC (MPVC-SR) nohavaozina
Amin'izao fotoana izao, amin'ny tetik'asa tsy fitrandrahana serasera, fantsona PE sy fantsona fototra silikone no ampiasaina matetika. Ny taranaka vaovao MPVC-SR vita amin'ny paompy natokana ho an'ny tsy fitrandrahana novolavolain'ny orinay dia ambony noho ny fantsona PE sy fantsona fototra silikone eo amin'ny lafiny fahombiazana, ny fomba fifandraisana, ny vidim-bola ary ny fitaterana.
◎ Fanoherana tsara ny fiantraikan'ny maripana ambany
Ny fantsona dia napetraka tao amin'ny vata fampangatsiahana 15C, ary ny fitsapana ny fiatraikany dia natao taorian'ny fihenan'ny hatsiaka 1H nefa tsy nisy triatra. Ny fifandraisana mora sy mahery vaika dia manana fifandraisana lakaoly manokana, izay azo ampifandraisina, ary ny tanjaky ny fifandraisana dia avo kokoa noho ny tanjaky ny fantson-tena.
◎ Tsy maharitra afo, fiarovana ny tontolo iainana, fanoherana ny horohoron-tany
Ny fantsom-piraketana MPVC-SR dia mahazaka afo sy mamono tena, ary ny fahaizany miaro ny lelafo dia mihoatra ny haavon'ny V0, izay tena manampy amin'ny fiarovana ny afo. Ny akora dia akora poloney sy fika entina manadio tontolo iainana. Miditra amin'ny tany ny fantsona ary tsy misy loto amin'ny tontolo iainana sy ny tany. Ny fantsona dia milevina amin'ny halalin'ny efatra ampahadimin'ny savaivony ivelany amin'ny fantsona, ary ny ampahadimin'ny savaivony ivelany an'ny fantsona dia miharihary ivelany.
◎ Fiadiana amin'ny harafesina sy fahanterana
Ny akora vita amin'ny fantsona MPVC-SR dia ny karbida kalsioma indrindra, izay miorina amin'ny vidiny ary ambany ny vidiny; ny coefficient an'ny friction dia 0.25-0.35, malama ny rindrina anatiny, kelikely ny fanoherana ny drag ary ny 1-3% dia ambany noho ny manodidina. Ny fahombiazan'ny vidiny dia tsara lavitra noho ny fantsona HDPE sy ny fantsom-bozaka silika.
Construction Fananganana ambony sy mety ary fitehirizana
Ny fantsom-pifandraisana MPVC-SR dia mahafeno ny fepetra takian'ny scenario manokana ary mety amin'ny tranokala fananganana misy rindrina, trano ary tranobe hafa, izay azo ampifandraisina rehefa misintona. Ary tsy mila famatsian-jiro amin'ny fifandraisana na fikojakojana, ary ny faladian'ny lakaoly manokana dia azo ampiasaina mivantana amin'ny fifandraisana amin'ny hafanan'ny efitrano, izay malefaka sy mety.